UNWTO: Tourism professionals to discuss mountain destinations hospitality models in Andorra | Meeting Industry News
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeShishini lokuhlangana » I-UNWTO: Iingcali zoKhenketho ukuxoxa ngeemodeli zokufikela kwiindawo zaseAndorra
Iindaba zeNdibano zeAndorra • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • Icandelo lokuhlangana • Iindaba zeShishini lokuhlangana • Abantu benza iindaba • Iindaba Zohambo Lwezemidlalo • Iindaba zoKhenketho • Iindaba zothutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba eziShukumayo
I-UNWTO: Iingcali zoKhenketho ukuxoxa ngeemodeli zokufikela kwiindawo zaseAndorra
Februwari 20, 2018
Ushicilelo lwe-10 lweNkongolo yeHlabathi yoKhenketho lweSiqithi neNtaba luza kubanjwa ukususela ngomhla wama-21 ukuya kowama-23 kweyoKwindla ngowama-2018 e-Andorra, phantsi kwesihloko esithi “Ukubumba Ikamva Lokubuk 'iindwendwe Kwiindawo Ezilungele Ukuya Entabeni”. ICongress ihlelwe nguMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO), uRhulumente waseAndorra kunye neKhomishini yase-Escaldes-Engordany. Lo msitho ubanjwa rhoqo emva kweminyaka emibini ubhiyozela iminyaka engamashumi amabini kulo nyaka.
Le ntlanganiso iza kudibanisa iintlobo ngeentlobo zeengcali kwezokhenketho, ukusukela kubaphathi beendawo zokhenketho lweentaba ukuya koosomashishini kwicandelo lendawo yokuhlala.
Olu hlobo luza kuba nezithethi ezingama-XNUMX zamazwe ngamazwe kwaye ziya kuvulwa ngu-Antoni Martí, iNtloko kaRhulumente wase-Andorra, uZurab Pololikashvili, uNobhala-Jikelele we-UNWTO, kunye noTrini Marín, uSodolophu wase-Escaldes-Engordany.
Umxholo omtsha 'wokubuk' iindwendwe '
Ngexesha leNkongolo, abathathi-nxaxheba baya kujongana nezihloko ezinje ngokubekwa kwakhona kwendawo yokuhlala yezokhenketho, imiceli mngeni yokwamkela iindwendwe, ifuthe leenkonzo ezintsha zamaqonga okhenketho okanye oko kubizwa ngokuba kukwabelana ngoqoqosho, ubukrelekrele bokuzenzela, kunye noqeqesho njengezinto eziphambili kwimpumelelo yendawo ekuyiwa kuyo.
Umsitho uzakucwangciswa ngeeseshoni ezintandathu, ezizakubanjwa ngomhla wama-21 nowama-22 kweyoKwindla e-Andorra la Vella Congress Centre. NgoLwesihlanu, nge-23 kaMatshi, utyelelo lobuchwephesha luza kubandakanya ukhenketho lwezixhobo ezitsha zeActuaTech eCaldea-Inúu, kunye nezinto ezahlukeneyo zokuzonwabisa.
Ingqungquthela yeHlabathi yoKhenketho lweSiqithi neNtaba
INkomfa yeHlabathi yoKhenketho lweSiqithi neNtaba yazalwa njengenyathelo le-UNWTO, uRhulumente waseAndorra kunye neeKomishini ezisixhenxe zaseAndorra, ngeenjongo zokwenza iqonga elisisigxina leengxoxo zophuhliso nozinzo lokhenketho kwiindawo ezisezintabeni. Ibanjwa rhoqo emva kweminyaka emibini.